WIFI थर्मोस्टेट: सुविधाहरू, अपरेशन र लाभहरू | नेटवर्क मौसम विज्ञान
तपाईंले सुन्नु भएको हुनुपर्छ एक WIFI थर्मोस्टेट वा स्मार्ट थर्मोस्टेट। तपाईंलाई लाग्ला कि यो नेटटमो थर्मोस्ट्याटसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो किनभने तिनीहरू देखापर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। यस तरिकाले, हाम्रो घरहरूमा एक राम्रो टेक्नोलॉजिकल लीप दिन सकिन्छ। र यो यो हो कि जब फ्रन्स्टहरू र जाडोको कच्चा कम तापमान आउँछ, हामी यो प्रश्न गर्न थाल्दछौं कि यो घर मा तताउने वा नहुनु आवश्यक छ कि छैन। एकातिर, हामी न्यानो हुनु आवश्यक छ, तर अर्कोतर्फ, हामी ती उच्च बिजुली बिलदेखि डराउँछौं।
हामी वाईफ़ाई थर्मोस्टेटको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं र यसको सबै सुविधाहरूको विश्लेषण गर्ने छौं। थप रूपमा, हामी यसको प्रयोगका फाइदाहरू र नोक्सानहरूमा जोड दिनेछौं। यदि तपाई अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने reading पढ्नुहोस्
1 वाइफाइ थर्मोस्टेट के हो?
2 स्मार्ट थर्मोस्टेट्स
3 घरलाई असर गर्ने पक्षहरू
4 WIFI थर्मोस्टेट को उपयोग गर्छ?
वाइफाइ थर्मोस्टेट के हो?
जब हामी तताउने कुरा गर्छौं, तब हामी यो महसुस गर्दैनौं कि प्रविधिको विशाल स्तरमा उन्नति भएको छ र बिभिन्न मुद्दाको बारेमा धेरै निर्माताहरू चिन्तित छन्। तिनीहरूले उत्पादन सुधार गर्छन् र विकल्पहरू खोज्छन् हामीलाई बिजुली खपत कम गर्नका लागि। इन्टरनेट डेटा संग जोडेको टेक्नोलोजी प्रणाली वर्षौं देखि विकसित हुँदैछ। तसर्थ, यसले हामीलाई अझ बढी सान्त्वनाको साथ तताउने प्रयोगको अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
जब तपाई काम छोड्नुहुन्छ तातो तापलाई सक्रिय पार्नको लागि कल्पना गर्नुहोस् ताकि तपाई घर पुग्दा वातावरण तपाईलाई न्यानो होस्। यो एक वाईफाई थर्मोस्टेट के गर्छ। यो एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जुन वाइफाइ नेटवर्कबाट घरको ताप को तापक्रम नियमित गर्न सक्षम छ। यसैले हामी यसलाई स्मार्टफोनको अनुप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्न सक्दछौं।
यो थर्मोस्टेट मा एक महान तार्किक क्रान्ति भएको छ र हीटर को नियन्त्रण लाई ठूलो सजिलो बनाएको छ। यो पहिले पहुँच भन्दा बाहिर थियो।
हाम्रो स्मार्टफोनबाट वाइफाइ नियन्त्रण कार्यक्षमता समावेशको साथसाथै यसले अन्य सुविधाहरू समावेश गर्दछ जसले हामीलाई आराम, बचत र सामान्य प्रयोग सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यसको मतलब हो कि स्मार्ट थर्मोस्टेट हाम्रो बानीबाट सिक्न सक्षम छ र जान्नको लागि आदर्श तापमान हाम्रो लागि के हो। योसँग मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रमहरू छन् जुन यो बढ्दो वा खसिरहेको तापक्रमको पूर्वानुमान गर्न सक्षम छ। थप रूपमा, यसले हामीलाई उपभोगको बारेमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ र हामीलाई बजेट स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ।
यी सबैले हामीलाई हाम्रो उपभोग र आराममा जीवनलाई थोरै आरामदायी बनाउन मद्दत गर्दछ। यो पत्ता लगाउनको लागि सक्षम छ कि यदि हामीले तापक्रम समायोजन गर्न र उपभोग अनुकूलन गर्न घर छोड्यौं। यी कार्यक्षमताहरूले हामीलाई बिजुली बिलमा एक राम्रो चुटकीबाट बचाउँछन्। यी केहि समायोजनहरूको साथ तपाईं हामीलाई उपभोग बानी सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, किनभने थर्मोस्टेट हाम्रो लागि काम गर्दछ।
बिजुली बचत भनेको यस्तो कुरा हो जसले जनसंख्यालाई बढी चिन्ता गर्दछ, बिजुलीको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। तसर्थ, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्: कि त हामी तताउने छौं र हामीले बिलको मूल्य बढायौं, वा हामी यो बिना चिसो हुन्छौं। अब यी लामो समयसम्म यी थर्मोस्टेट्सको अस्तित्वका लागि धन्यवाद हुँदैन।
वाईफाई थर्मोस्टेट को निर्माताहरु अनुसार, बचत को हीटिंग को उपयोग गर्न अनुकूलन को क्षमता बाट आउँछ र घण्टा यो अपरेटि remains मा रहन्छ। त्यो हो, यी थर्मोस्टेट्स उनीहरूको अपरेशनलाई अधिकतममा गति लिन सक्षम छन् आराम बिना नै बिल्कुलै। यद्यपि, एक पारम्परिक थर्मोस्टेट प्रयोगको लागि समान इष्टतम मापदण्ड अन्तर्गत काम गर्दैन। यसले तपाईंको तालिकालाई ध्यानमा राख्दैन, न घरको बाहिरी तापक्रमको इन्सुलेशन।
यो सबै बनाउँदछ कि तिनीहरू सँधै समान रूपमा कार्य गर्दछन् र पक्कै पनि ठूलो शक्तिको खेर फालिएको छ जब यसलाई रोक्न सकिन्छ।
घरलाई असर गर्ने पक्षहरू
स्मार्ट थर्मोस्टेट्सले उपभोग घटाउन घरका धेरै मौलिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्छ। यी पक्षहरू मध्ये हामी पाउँछौं:
हाम्रो जीवनको बानी हरेक परिवारमा फरक हुन्छ। परम्परागत थर्मोस्टेटहरू जहिले पनि उस्तै कार्य गर्दछ। जहाँसम्म, WIFI थर्मोस्टेट हाम्रो तालिकामा समायोजन गर्दछ। उदाहरण को लागी, थर्मोस्टेटलाई थाहा छ हामी कुन घरमा घर जान्छौं र तपाईंलाई चाहिने स्थिर तापमान २० डिग्री छ। यदि दिन सामान्य भन्दा चिसो छ भने, बायलर अर्को दिन भन्दा करीव 20० मिनेट पहिले सक्रिय हुनेछ ताकि तपाईं घर पुग्दा तापक्रम स्थिर रहनेछ। अर्कोतर्फ, दिन तातो हुन सक्छ र तपाईं कोठा को ताप गर्न केवल १ minutes मिनेट मात्र आवश्यक छ।
खातामा लिनुहोस् घरमा इन्सुलेशन सामग्री तताउने नोक्सान गणना गर्न। यसले कार्यप्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्दछ।
समय भविष्यवाणी यो मौसमको जानकारीलाई बाहिरको तापक्रम अनुसार कार्य गर्न सक्षम गर्दछ।
यी सबै कार्यक्षमता घर मा ताप को प्रदर्शन मा ठूलो सुधार र ऊर्जा र पैसा बचत।
WIFI थर्मोस्टेट को उपयोग गर्छ?
यस प्रकारको थर्मोस्टेट विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। हाम्रो घरको आराम नियन्त्रण गर्न सक्षम हुँदै, त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् जुन उनीहरूले हामीलाई बानीको आधारमा प्रस्ताव गर्दछन्। संक्षेप मा, ती हाम्रो लागि जीवन धेरै सजिलो बनाउँदछन् र हामीलाई पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछन्।
कसै-कसैलाई लाग्न सक्छ कि कस्तो किसिमको स्मार्ट थर्मोस्टेट डिजाइन गरिएको हो। ठिक छ, यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू छन्:
मानिसहरू जो घरबाट धेरै टाढा खर्च गर्छन्। यो किनभने जब उनीहरू घर पुग्छन् उनीहरुलाई चिसो लाग्छ। यदि तिनीहरूसँग परम्परागत थर्मोस्टेट छ भने, यसले सक्रिय हुन समय लिनेछ र यदि तिनीहरूले यसलाई छोडिदिए भने तिनीहरू ऊर्जा खेर फाल्नेछन् र प्रकाशको मूल्यलाई असर गर्नेछन्।
घरहरूको लागि जुनसँग पारम्परिक थर्मोस्टेट छ र धेरै उच्च बिजुली बिल प्राप्त गर्दछ।
कार्यालयहरू, व्यावसायिक परिसर र स्टोरहरूमा जो ग्राहकहरु को लागी राम्रो आराम राख्नु पर्छ। राम्रो मुनाफा पाउने राम्रो तरिका उत्पादन लागत घटाउनु हो। वाइफाइ थर्मोस्टेटको साथ तपाईको बिजुली बिलमा बचत गर्नको निम्ति के उत्तम तरिका।
अधिक बिलहरू तिर्नबाट बच्नको लागि भाडाको घर भएका व्यक्तिहरू उत्तम विकल्प हुन्छन्।
ती घरहरू जुन चिसो मौसम र कम तापमानबाट वर्षमा धेरै दिन ग्रस्त छन्।
ती सबै घरहरू जुन पुरानो इन्सुलेशन छ।
जवान बच्चाहरू वा बढि हेरचाह आवश्यक पर्ने बुढा व्यक्तिहरूका परिवारहरूको लागि।
तपाईले सबै भन्दा राम्रो WIFI थर्मोस्टेट्स भेट्टाउनुहुन्छ जुन विभिन्न प्रकारका हीटरसँग मिल्दो छ र तपाई यसलाई जब चाहानुहुन्छ प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ वाइर्ड भएका पनि छन् र ती सबै व्यक्तिगत बोयलरको लागि प्रयोग गरिन्छ।
मलाई आशा छ कि यस लेखको साथ तपाईले आफ्नो बिजुली बिल बचत गर्ने र स्मार्ट हीटिंगको दुनियामा शुरू गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » WIFI थर्मोस्टेट